ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်း | The World of Pinkgold
Category Archives: ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်း
ဘလော့ဂ်ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ? ဘလော့ဂ်၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာသဘောသဘာဝ၊ ဘလော့ဂ်ကို ဘယ်လိုဖန်တီးကြမှာလဲ? ဘလော့ဂ်၏ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်များအကြောင်း၊ ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိမြန်မာဘလော့ဂါများ ဘာတွေလုပ်နေကြလဲ? စသည်တို့ကို တစ်နေရာတည်းသိရှိသွားစေဖို့ “Why do we blog?” အမည်ရှိ Seminar သို့ ကြွရောက်လေ့လာကြပါရန် လေးစားစွာဖိတ်မန္တကပြုအပ်ပါသည်။
နေ့ရက်။၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့ (စနေနေ့)
အချိန်။နေ့လည် (၁၁) နာရီမှ ညနေ (၅) နာရီအထိ။
နေရာ။ ရန်ကုန် MICT Park